Mampifandray ny finday amin'ny paikadim-barotra ivelan'ny trano | Martech Zone
Mampifandray ny finday amin'ny paikadim-barotra any ivelany
Alarobia, Jolay 15, 2009 Alahady, Jona 21, 2015 Adam Small
Marketing finday mipoitra ary lasa mahazatra kokoa isan'andro. Ny herinandro lasa teo dia namangy fianakaviana tany amin'ny faritry Myrtle Beach aho ary nahita an'ity takelaka ity. Nahafinaritra ny nahita fisarihana lehibe mampiditra ny finday amin'ny paikadim-barotra ankapobeny.
Doug dia manana fampidirana finday mitovy amin'izany amin'ny tranokalany, azonao atao lahatsoratra MartechLOG mankany 71813 ary mahazoa fanairana rehefa mandefa izy! Notapahiko ny shortcodes ivelan'ity sary ity mba tsy hisy halaim-panahy handefa azy ireo mandefa hafatra (mandany vola amin'ny dokambarotra izany).
Tsy io ihany no takelaka bileta hitako tamin'ny fampidirana finday. Nahita fivarotana afomanga nangataka anao aho soratra hoe "BANG" amin'ny kaody fohy ho an'ny tolotra manokana koa!
Amin'ny alàlan'ny fampifangaroana ny fandefasan-kafatra amina hafatra amin'ny bileta, Aquarium an'i Ripley:
Ankehitriny dia afaka manara-maso ny fahombiazan'ny takela-by.
Afaka manara-maso ny fahalianan'ny mpamorona vaovao.
Nampahafantatra sosona fifandraisana vaovao amin'ny mpanjifa.
Fampisehoana mangatsiaka iray hafa izay azo ampidirina ao amin'izany ny fahaizana manaitra ny dokam-barotra sy manome azy ireo laharana finday an'ny mpanjifa. Alao an-tsaina ny fandefasana hafatra ho an'ny tolotra Aquarium an'i Ripley ary minitra vitsy taty aoriana dia niantso anao ny solontena iray ary manontany raha manana fanontaniana ianao!
Ohatra tsara dia tsara amin'ny fomba hanatsarana ny fampidirana finday ny paikady fanaovana dokambarotra ivelany. Inona no ataonao amin'ny finday?
Tags: dokam-barotra amin'ny takelakafinday-barotradokambarotra ivelanySMSfandefasana hafatra an-tsoratra
Ahoana no fomba hamoronana mailaka hamerenana ny mpanjifa
Izy rehetra dia momba ny kaody azo ampiasaina indray? er… Atiny
Jul 16, 2009 amin'ny 2: 11 AM
Ity dia ohatra azo ampiharina tsara amin'ny fomba ahafahan'ny haino aman-jery nentim-paharazana mampiasa teknolojia vaovao ary mijanona ho manan-danja hatrany. Mahatonga ahy hanontany tena hoe inona no paikadin'ny haino aman-jery nentim-paharazana afaka mahita fiainana vaovao amin'ny alàlan'ny fampiasana haitao haino aman-jery vaovao.
Misaotra nanoratra azy!
Jun 14, 2012 ao amin'ny 5: 32 PM
Lahatsoratra mahafinaritra, feno sy mampientam-po tokoa izy io! izany tokoa
manampy ahy, ary tena tsara ny weblog-nao. Tena hizara aho
ity URL miaraka amin'ny namako. Nanamarika ity tranokala ity fotsiny